Nylon Bonded Threads, Threaded Nylon Thread for Leather
Yakasungwa Nylon Sewing Thread
Nylon yakasungwa yekumonera tambo inogadzirwa ne polyamide 6.6 synthetic fiber, rine zita rakakurumbira nylon 6.6 kana 6 synthetic fiber. Kubudikidza nekumonyanisa iyo fiber, uye kunamatira uye kupedzisa fiber yese pamwechete senge imwe, iyo yakasungwa tambo haina kudzima, kwete yekotoni uye ine yakanyanya kuramba kurwisa mukuita kwekusona.
Chigadzirwa chezvinhu:Yakanaka Kusimba, Yakanaka UV uye Abrasion Dziviriro, Yakaderera Elongation, Yakakwira Isina Midzi Pfuma, Yakasununguka Tambo Yakadzivirirwa, Yakanyanya Seam Simba Simba & Chitarisiko, Yakakura Ruvara Range
Iyo yekusona mhedzisiro inoshamisa kwazvo, nekuda kwekubatsira kwezvinhu zvenylon uye nemhedzisiro yekurasa mafuta, Inoshanda kune ese marudzi eganda zvigadzirwa, bhegi, mukwende, mota, zvigadzirwa zvekunze, nezvimwe.
100D / 3, 150D / 2, 150D / 3, Yakanyanya kushandiswa kune micheka yakagadzirwa machira ematehwe: senge wallet, machira, mapegi, raincoats, nguo dzematehwe, magurovhosi ematehwe, nezvimwe.
210D / 2, 210D / 3, 250D / 3, Inonyanya kushandiswa mune zvigadzirwa zvehombodo uye zvehombodo: seshangu dzematehwe, zvikwama zvehombodo, masutu, zvipfeko zvehanda
Micheka yeTicker: meno ekuzora, shangu dzekufamba, mabhegi ekufamba, matende, machira sofa, mibhedha, sofa, nezvimwe.
300D / 3, 420D / 3, 630D / 3, Kunyanya inoshandiswa zvigadzirwa zveganda rakakura: sofas, cushion yemotokari, shangu dzemitambo, mabhanhire, nezvimwe.
Micheka yejira rakatetepa: canvas, bhuku reakaunzi, tende, hombodo, etc. Zvigadzirwa-zvakashongedzwa nemaoko, makiti, machira akatarwa.
840D / 3, 1260D / 3, Yakanyanya kushandiswa pakakura katsi, zvigadzirwa-zvakashambwa maoko, mabhegi ekuisa, nezvimwe.
210D / 4 Nylon Yakasungwa Thread
420D / 3 Yakasungwa Nylon Thread
210D / 3 Nylon Yakasungwa Thread